Translate Macedonian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Macedonian to Myanmar (Burmese), Macedonian to Myanmar (Burmese) translations, Macedonian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Здраво како си မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Има ли некој? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Те сакам навистина толку многу ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Колку чини овој хамбургер? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Можете ли да ме викате такси? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
жал ми е ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Извини ме တဆိတ်လောက်
Заинтересиран сум ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Мојот лет беше одложен အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Тука сум за бизнис ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Здраво Моето име е မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Жал ми е, но јас сум оженет ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Би сакал да те прашам ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Можете ли да ме однесете на аеродромот? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Кое е времето сега, молам? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Каде е најблиската полициска станица? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Можам ли да го позајмам телефонот полнач молам? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Можете ли да ми помогнете? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Нареди ми пие, молам? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Колку чини? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Јас сум алергичен на глутен ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Повикајте лекар ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Има ли лекар? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Може ли да се јавам? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Кажи ми го твојот шеф, молам. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ова место е многу убаво ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ве однесе во хотелот ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Кој е бројот на мојата соба? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?